Voampanga Ho Naniratsira, Bilaogera Telo Voatàna Am-ponja Any Bangladesh · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Avrily 2013 9:23 GMT
Vakio amin'ny teny Français, polski, Español, Nederlands, English
Voamarina izao fa nitazona bilaogera miisa telo ny Sampam-pitsikilovan'ny Polisy ao Bangladesh – Rasel Parvez, Mashiur Rahman Biplob & Subrata Adhikari Shuvo - omaly alina noho izay ambara fa nosoratan'izy ireo tsy manisy vidiny ny finoana Silamo sy ny mpaminany Muhammad. Nampanantsoina tany amin'ny biraon'ny polisy aloha ry zareo ary taorian'izay dia nentina nankany an-tranony ka nogiazana ny solosaina findainy, ny finday sy ireo fitaovana hafa. Nentina any amin'ny toerana tsy fantatra izy ireo.
Izao no nitranga taorian'ny nandraisan'ny governemanta fepetra hanenjika ireo bilaogera sy mpampiasa Facebook izay manao fanamarihana manafintohina mikasika ny finoana silamo sy ny mpaminany Muhammad. Ny 31 Martsa, nandefa lisitra iray misy bilaogera 84 [bn] ho an'ireo sivy mpikambana ao amin'ny komity ahitàna ny Ministeran'ny Atitany ny solotenan'ireo mpitondra fivavahana Silamo avy amin'ny mahery fihetsika, miampanga azy ireo ho tsy mino an'Andriamanitra sy nanoratra manohitra ny finoana Silamo.
I Rasel Parvez, izay manampahaizana, fizisiana, bilaogera sady mpanoratra, dia manana bilaogy roa ka ny iray ampiantranoin'ny Sehatra Somewherein.net, ary ny iray hafa ao amin'ny Amarblog.com. Kanefa izy dia nampangaina ho namoaka votoaty tany anaty bilaogy iray hafa teo ambanin'ny solonanarana Opobak.
Mashiur Rahman Biplob dia manoratra am-bilaogy eo ambanin'ny solonanarana Allama Shoytaan (Mullah Devil) any anaty toerana samihafa any, isan'ireny ny Somewherein.net
Subrata Adhikari Shuvo manoratra ao amin'ny Amarblog.com amin'ny tena anarany. Izy dia nampangaina ho namoaka votoaty teo ambanin'ny solonanarana Lalu Koshai.
Ho hita eo raha toa ny manampahefana ka ho afaka hanaporofo tokoa fa ireto bilaogera ireto dia “minia” na nanam-pikasàna “hanimba” “ny fijoroana ara-pinoan” ny hafa tokoa tany anatin'izay nosoratan-dry zareo. Ny Sampam-pitsikilovana dia hanao famelabelana ho an'ny mpanao gazety androany amin'ny mitataovovonana (ora any Bangladesh).
Hatramin'ny omaly, ilay sehatra malaza fitorahana bilaogy Amarblog.com dia lasa tsy azo nidirana intsony avy ao Bangladesh. Kanefa, azo itsofohana avy amin'ny alàlan'ny proxy ihany ilay bilaogy. Tao anaty fanambaràna iray dia niteny ilay sehatra fampiantranoana bilaogy hoe:
Asif Mohiuddin, ilay bilaogera nahazo Mari-pankasitrahana, dia notazonin'ny sampam-pitsikilovan'ny polisy koa tamin'ny Alarobia teo. Hoy ny Daily Star ohe:
MK Alamgir, Minisitry ny Atitany ao Bangladesh dia nampahafantatra fa nahita bilaogera 11 ny Ministera, “izay nanohintohina ny hambom-po ara-pinoan'ireo Silamo tamin'ny alàlan'ny zavatra nosoratany”. Efatra tamin'izy ireo no efa voasambotra raha mbola misokatra kosa ny fihazàna ireo bilaogera fito ambiny.